अन्तरवार्ता Archives - A complete Nepali news portal based on news & views
२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १३:२६ March 8, 2021 Buddha Sharan
नेपालको हरेक संयन्त्रमा पितृसत्तात्मक सोच रहेकै कारण महिला हिंसा न्यूनिकरण चुनौती थपिएको राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले बताएका छन् । नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबू केन्द्रीय समिति महिला विभागले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्नुहुँदै आयोगका अध्यक्ष पराजुलीले पितृसत्तात्मक सोच पुरूषहरूमा मात्र नभइ राज्यका विभिन्न संयन्त्रमा समेत रहेकाले यसको अन्त्यका लागि सबैमा जागरण आवश्यक रहेको बताउनु भयो […]
लद्दाखमा ४ हजारको संख्यामा गोर्खा सैनिक पठाइएको भनिएको छ । भारतले गोर्खा सैनिक नै युद्ध मैदानमा पठाउनुको मुख्य कारण के होला ? भारतले जहाँ पनि अफ्ठ्यारो, गाह्रो, साह्रोमा गोर्खा सेनाको प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यो पनि अफ्ठ्यारो ठाउँ हो । गोर्खालीलाई अगाडि पठाउने काम गरिरहेको छ । उसका सेना पनि मरिरहेका छन् । तर […]
काठमाडौँ। नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद चुलिएपछि संवादहीनताको अवस्थामा रहेका नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच शनिबार वार्ता भएको छ। भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई शनिबार टेलिफोन गर्दै बधाई दिएका थिए। भारतीय विदेश मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा बधाई दिएका उल्लेख छ। ‘उहाँले भारतले हालसालै राष्ट्रसंघीय सुरक्षा […]
३० चैत्र २०७६, आईतवार १२:०३ April 12, 2020 Nonstop Khabar
(शुक्रबार भारतीय मिडियाहरुले नेपालबारे एक अफवाह फैलाए । भारतमा कोरोना भाइरस फैलाउने षड्यन्त्र भैरहेको अफवाह फैलाइएकाे थियाे र नेपालको पर्साबाट यस्तो प्रयास भैरहेको उनीहरुको आरोप थियाे । समाचारमा पर्साका एक मेयर जालिम मुखियाको संरक्षकत्वमा पाकिस्तानी मुसलमानहरुले यस्तो योजना बनाइरहेको बताइएको थियाे। समाचारमा भनिएका व्यक्ति जगरनाथपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जालिम मियाँ हुन् । उनी सत्तारुढ दल नेपाल […]
विश्वका शक्तिशाली मुलुकलाई समेत हल्लाइरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि नेपालमा पनि सरकार र सम्बन्धित पक्षबाट उच्च प्राथमिकताका काम भइरहेका छन्। सरकारले रोकथामकै लागि यही चैत ११ लकडाउन जारी गरेको छ भने सीमानाका र हवाइमार्गबाट आवागमन बन्द गरेको छ। कोरोनासँग जुध्ने यस मोर्चाको अग्रपंक्तिमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी रहेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रको अभिभावकीय […]
२ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १२:४८ February 14, 2020 Nonstop Khabar
धेरैले प्रेमको विषयमा आ—आफ्नै परिभाषा दिइरहेका हुन्छन् । तपाईँलाई चाहीँ प्रेम भनेको के हो भन्ने लाग्छ ? —जीव कै जीवनमा र मानिसको जीवनमा एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो — यौन र सन्तान उत्पादन । किनकी सन्तान उत्पादन नभईकन समाज नियमित रुपमा चल्दैन । त्यसको निम्ति उसलाई विपरीत लिङ्गीहरु बीचको यौनको आवश्यकता पर्दछ । त्यो यौन जीवनलाई […]
पौष २२ ,काठमाडौँ । बाल साहित्य रचना भन्दा छुट्टै यो पटक पाठकमाझ अग्रज सहिद दशरथ चन्द ,गंगालाल ,शुक्रराज शास्त्री र धर्मभक्तको पुस्तक प्रकाशनमा ल्याकाछौ । अन्तीम धर्मभक्तको पुस्तक शायद अर्को सप्ताह पछि सम्ममा छपाई सकिन्छ होला । सहिद आफै बोलेको यो पुस्तकमा उहाहरुकाे बारेमा म लगतेत मेरो सहयोगी निकै मेहनत गरेका छन् । संछिप्तमा बाल […]
विनिता रञ्जित प्रधानाध्यापक पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालय, बालुवाटार, काठमाडौं समग्र विद्यालयको बारेमा बताइदिनुस् ? यो विद्यालय २०१७ सालमा स्थापना भएको हो । तत्कालीन वडाध्यक्ष स्व. भक्तबहादुर खड्काले घरको पिँडिमा बच्चाहरु खेलेको देखेपछि यिनीहरुलाई पढाउन पर्ने रहेछ भनेर एकजना शिक्षक बोलाएर घरमै आँगनबाटै पढाउन शुरु गर्नुभएको विद्यालय हो । विद्यार्थी बढ्दै गएपछि नजिकैको वैष्णदेवी मन्दिरको पाटीमा […]
७ मंसिर २०७६, शनिबार १७:११ November 24, 2019 Buddha Sharan
नेपालमा जनवादी राज्यसत्ता स्थापनाको कम्युनिष्ट माओवादी राजनीतिमा चालीस वर्ष क्रान्तिकारी राजनीति गर्नुभएका प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का पोलिटब्यूरो सदस्य कुष्णप्रसाद धमला (गम्भीर)ले पार्टीका पछिल्ला सैद्धान्तिक र कार्यनीतिक नीति र विचारमा असहमति जनाउँदै पार्टी परित्याग गर्नुभएको छ । मंसिर ३ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले उक्त पार्टी परित्याग गर्दै स्वतन्त्र वामपन्थी रहँदै राजनीतिक जीवन अगाडि […]
प्रा.विजयकान्त कर्ण डेनमार्कका लागि पूर्व नेपाली राजदुत हुनुहुन्छ । मधेश मामिलामा गहिरो अध्ययन गर्नुभएका कर्ण नेपाली राजनीतिमा आलोचनात्मक विश्लेषकका रुपमा पनि चिनिुभएको छ । उहाँसँग ननस्टपखबरको डेस्कले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणबाट नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध बलियो भएको भन्ने चर्चा चलेको छ । त्रिदेशीय सम्बन्धका कुरा पनि उठेका छन् । तपाईले […]